Njem ndị njem nlegharị anya na-ewepụta Platform njem ahaziri onwe nke izizi nke ụwa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ọbịa ọbịa » Njem ndị njem nlegharị anya na-ewepụta Platform njem ahaziri onwe nke izizi nke ụwa
Njem ahaziri ahazi
Dị ka ụlọ ọrụ njem amụtala ụzọ siri ike maka ọrịa Covid-19, mgbanwe dị mkpa maka nlanarị n'oge ọrịa. Eleghị anya ọ nweghị ngalaba nwere nnukwu ọgbaghara dị ka ụlọ ọrụ njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ, dịka ụlọ ọrụ nọ n'azụ ndị njem nlegharị anya Israel, ụlọ ọrụ nlegharị anya n'ịntanetị nke izizi nke Israel, nwere ike ịgba akaebe nke ọma. Dị ka nzaghachi na nso nso-nchịkọta mmechi nke Israel na njem nlegharị anya, ụlọ ọrụ ahụ lekwasịrị anya n'akụkụ ụwa ndị ọzọ. Ugbu a ọ malitela ọrụ ọzọ na-agbanwe egwuregwu nke na-ejikọta teknụzụ iji mepụta ngwaahịa njem pụrụ iche zuru ụwa ọnụ. Njem Njem Nleta bụ usoro njem njem hi-tech nke na-enye nhọrọ nlegharị anya ụbọchị, ngwugwu ọtụtụ ụbọchị, na ụlọ oriri na ọṅụṅụ ndị e mere iji nye onye njem nwere nghọta ihe kachasị mma nke ihe ebe ha na-aga ga-enye. N'ịgbakọ ndepụta nke mba 20 ma na-eto eto, ndị njem nwere ike ịchọta njem nlegharị anya na ahụmahụ mara mma nke ezigbo ndị nduzi obodo na-eduzi, raara onwe ha nye inye ndị ọbịa na obodo ha na-enwe mmekọrịta chiri anya. Njem njem nlegharị anya na-enwe mmasị n'inye ndị njem ihe karịrị ahụmahụ njem nlegharị anya, na onyinye ya bụ ezigbo ngosipụta nke ahụ.
"Anyị malitere njem njem nlegharị anya ime ihe dị iche," Ben Julius, Onye guzobere Njem Nlegharị anya kwuru. “Ọ dịghị ihe dị ka nke a. Google karịrị akarị ma na-ewe oge, na ọtụtụ ndị ọrụ njem aghọtaghị ihe anyị chọrọ dị ka ndị njem - ma ọ bụrụ na ha mere ya, ọ bịara na nnukwu ọnụ ahịa. Ya mere, anyị wuru ngwọta maka nsogbu ahụ. Ihe kacha anyị mkpa bụ ịnye ahụmịhe kachasị mma, ngwaahịa ntụkwasị obi, yana ọrụ enweghị atụ na ọnụ ahịa mara mma dị ịtụnanya. Maka anyị, okomoko ọhụrụ pụtara ahaziri ahazi, ahaziri yana ezigbo ya. Site na njem njem nlegharị anya, nhazi ọkwa dị elu na eziokwu adịkwaghị mkpa iji mkpado ọnụ ahịa dị elu bịa.”
Tinyere nhọrọ nke njegharị na ngwugwu, Njem njem nlegharị anya ewebatala ihe ọhụrụ na-agbawa obi, Mepụta njem m ka imepụta. ahaziri njem ngwungwu. Ngwá ọrụ a na-agbanwe egwuregwu, teknụzụ njem na-ebu ụzọ, na-ahapụ onye ọ bụla ịhazi njem njem ahaziri onwe ya nke ọma yana ebe obibi, njem nlegharị anya, ahụmịhe na njem. Mgbe onye njem ahụ zaa ajụjụ dị iche iche gbasara ebe ha na-aga, ogologo njem, mmasị, ahụmịhe ha chọrọ, na ụdị njem, Mepụta njem m na-emepụta usoro njem njem zuru oke n'ime nkeji 3, nke onye njem nwere ike dezie, kesaa na akwụkwọ ozugbo. Na-ejikọta algọridim dị mgbagwoju anya nke nwere ọmarịcha njem nlegharị anya na ndị mmekọ ile ọbịa n'ofe ụwa niile, Njem M na-ahazi usoro nke ga-achọkarị iwere onye ọrụ njem omenala ma ọ bụ ogologo awa nke nyocha na atụmatụ onwe, n'ime usoro dị ngwa, na-atọ ụtọ na dị mfe. Dị ka ihe atụ, a wine-ịhụnanya akụkọ ihe mere eme buff onye chọrọ ịchọta a njem ngwungwu na Italy n'ihi na ụbọchị anọ nwere ike ịmepụta a omenala njem njem na-ewe ha na winery tours, tastings, na obodo mepere emepe ije njegharị pụta akụkọ ihe mere eme bara nnukwu uru, na a nso nke magburu onwe hotel nhọrọ na nke ọ bụla ebe. Mepụta njem m pụrụ iche n'ikike ya iji teknụzụ mana na-enwe mmetụta nkeonwe, dịka ndị ọkachamara njem njem nlegharị anya jiri nlezianya họrọ wee nyochaa ya. Ikwe ka ndị njem na-edepụta ọtụtụ akụkụ nke njem ha n'ime nkeji na-eme ka a hụ na ha nwere njikọkọ ọnụ, n'ụzọ ezi uche dị na ya, na ahụmahụ na-enweghị nchekasị. Ọ ka bụ mmalite egwuregwu, mana ọ dịlarị mma ịsị na Njem Nlegharị anya na-aga n'ihu ịghọ onye ọkpụkpọ isi n'ọdịniihu nke njem na njem nlegharị anya.